Home » Ny olona ao amin'ny Travel & fizahan-tany » 'Chief Pilot' vaovao no mitondra ny lohany ao amin'ny seranam-piaramanidina Munich
Jost Lammers eo amin'ny toeran'ny kapiteny amin'ny maha filoham-pirenena sy CEO an'ny seranam-piaramanidina Munich hatramin'ny 1 Janoary
Ny fanolorana ny asa ambony eto amin'ny seranam-piaramanidina Munich dia ofisialy izao: Taorian'ny fisotroan-dronono an'ny Dr. Michael Kerkloh, ny filoha efa ela, CEO ary talen'ny asa ao amin'ny Flughafen München GmbH (FMG), tamin'ny faran'ny taona 2019, Jost izay nandimby azy. Lammers, dia nandray ny andraikiny vaovao tamin'ny 1 Janoary 2020. Avy hatrany, Jost Lammers dia hitarika ny ekipan'ny FMG miaraka amin'ny talen'ny mpitantana Thomas Weyer (CFO sy ny fotodrafitrasa) ary Andrea Gebbeken (Varotra sy fiarovana).
Amin'ny fanendrena ny CEO vaovao, Seranam-piaramanidina Munich mijanona eo am-pelatanan'ny manam-pahaizana momba ny fiaramanidina efa za-draharaha. Jost Lammers (52), izay teraka tany Oldenburg ary nihalehibe tao Osnabrück any Lower Saxony, dia nitana andraikitra ambony amin'ny fitantanana ambony seranam-piaramanidina eropeana maro hatramin'ny faran'ny taona 1990.
Taorian'ny sekoly ambaratonga faharoa dia niditra tamin'ny fiofanana arak'asa niaraka tamin'ny banky izy talohan'ny nahavitany ny raharaha miaramila niaraka tamin'ny tafika an'habakabaka alemana. Avy eo dia nianatra momba ny fitantanan-draharaha sy ny siansa ara-toekarena tany Bayreuth, Witten-Herdecke ary San Diego izy. Nahazo diplaoma tamin'ny mari-pahaizana momba ny toekarena izy ary nanomboka ny asany tamin'ny mpamatsy fiara tamin'ny taona 1994. Roa taona taty aoriana dia niditra tao amin'ny vondrona mpanorina alemana HOCHTIEF AG izy, izay niasa tamin'ny fanaraha-maso sy ny fitantanana ny fampiasam-bola.
Tamin'ny famindram-pahefana tamin'ny taona 1998 ho any Hochtief Airport GmbH, nanomboka ny tontolon'ny seranam-piaramanidina izy, naka andraikitra tompon'andraikitra amin'ny seranam-piaramanidina portfolio Hochtief isan-karazany. Anisan'izany ny fandraisana anjara amin'ny vaomiera sy fanokafana ny seranam-piara-manidina vaovao any Atena, ohatra. Tamin'ny 2004 Andriamatoa Lammers dia notendrena ho talen'ny fitantanana Flughafen Düsseldorf Ground Handling GmbH, mpamatsy asa lehibe amin'ny serivisy fitantanana tany ao amin'ny seranam-piaramanidina Düsseldorf. Efatra taona taty aoriana dia nokaramaina ho CEO ny Budapest Ferenc Liszt International Airport. Nijanona teo hatramin'ny faran'ny taona lasa izy ary nandray anjara biriky lehibe tamin'ny fahombiazan'ny seranam-piaramanidina nanompo ny renivohitra Hongroà.
Jost Lammers dia manaraka ny dian'ny Michael Kerkloh eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ihany koa: Tamin'ny fahavaratry ny taona lasa dia nandimby an'i Dr. Kerkloh izy izay filohan'ny Bandara Council International (ACI) Europe, ilay fikambanan'ny indostria misolo tena ny seranam-piaramanidina iraisampirenena eropeana. Jost Lammers dia manambady ary manan-janaka roa lahy.
ANA dia nanitatra ny fiaramanidina Narita-Honolulu tamina A380 FLYING HONU vaovao